कसरी हाँस्दा शरीरलाई फाइदा पुग्छ ? - ज्ञानविज्ञान
हामी यदि हाँस्छौ भने, त्यसले हामीलाई खुसी तुल्याउँछ । हामीलाई मात्र होइन, हामी आसपासका मौहल पनि रमाइलो बन्छ । साथमा रहेकाहरु खुसी हुन्छन् । यसले सकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ ।
हाँस्नका लागि हामीले पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । न पालो पर्खनुपर्छ । जहाँपनि, जहिलेपनि हाँस्न सकिन्छ । कतिले भन्छन् पनि, ‘जसले हाँस्न जानेको छैन, उसले बाँच्न पनि जानेको छैन ।’
हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै लाभदायक छ । यो हामीलाई थाहा छ । तैपनि हामी हाँस्न कञ्जुस गर्छौ । कुष्ठा, आवेग, इष्र्या, दुख, पीडा जस्ता तत्व हावी भएपछि हामीलाई हाँस्न मन लाग्दैन । वा हाँस्न सक्दैनौ । जबकी हाँस्दा यी मनोविकार पनि हट्ने बताइन्छ ।
हाँस्नु भनेको आफैमा उपचार हो । जब हामी दिल खोलेर हाँस्छौ, शरीरका भित्री अंगहरुको व्यायाम हुन्छ । रक्त प्रवाह राम्ररी हुन्छ । यसले हृदयलाई स्वस्थ्य राख्छ । जसरी स्वच्छ हावा, स्वस्थ्य खानपान शरीरका लागि जरुरी हुन्छ, उसैगरी हाँसो पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
हाँस्ने अनेक बाहना
हाँस्नका लागि अनेक बाहना खोज्न सकिन्छ । कुनै न कुनै निहुँ बनाएर मस्त हाँस्न सकिन्छ । यसले मनोविकार हटाउँछ । चिन्ता, तनाव, पीडा अनुभव हुन दिदैन । नकारात्मक भाव आउन दिदैन ।
हुन त अहिले हाँस्ने अभ्यास पनि गराइन्छ । विभिन्न योगा कक्षमा हाँस्न सिकाइन्छ । बिहानको ताजा हावामा उन्मुक्त हाँस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार हाँस्दा मनमा उमंग छाउँछ, खुसी छाउँछ । शरीरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुन्छ ।
खुलेर हाँस्दा शरीरमा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ । जब हामी हाँस्छौ, शरीरमा अक्सिजन पुग्छ । अक्सिजनले मुटुको पम्प रेटलाई ठीक राख्न मद्दत गर्छ ।
प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो
हाँस्दा हाम्रो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ । यसले हामीलाई विभिन्न रोगसँग लड्न सहयोग गर्छ । स्वास्थ्य जीवनका लागि हाँस्नैपर्छ ।
यदि अनिन्द्राको समस्या छ भने, खुब हाँसौ । यसले शरीरमा मेटलाटोनिन नामको हर्मोन बनाउँछ । यो हर्मोनले निन्द्रा लाग्न सहयोग गर्छ ।
हाँस्दा हाम्रो मुटुले राम्ररी काम गर्न पाउँछ । साथै नियमित रुपले हाँस्दा हृदयघातको खतरा रहँदैन । हृदयसँग सम्बन्धित रोग पनि लाग्दैन ।
जवान र सुन्दर देखिने
जवान र सुन्दर देखिने चाहाना जो कोहिलाई हुन्छ । यो चाहाना पुरा गर्ने एउटा माध्याम हो, हाँसो । जब खुलेर हाँसिन्छ, अनुहारको मांसपेशीले राम्ररी काम गर्छ । यसले गर्दा अनुहारको चारैतर्फ रक्त प्रवाहुन्छ । यसले सुन्दर र जवान देखिन्छ ।
तनाव हटाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो एवं प्राकृतिक औषधी हो, हाँसो । हाँस्दा हाम्रो मुड परिवर्तन हुन्छ । यसले तनाव हटाइदिन्छ ।
शरीरमा ताजा हावा
जब हामी हाँस्छौं, तब फोक्सोमा ताजा हावा पुग्छ । यसले शरीरमा अक्सिजनको आपूर्ति राम्ररी हुन पाउँछ । हाँस्दा इनर्जी पनि मिल्छ ।
Topics #शरीर #हाँस्दा
Don't Miss it कति सुरक्षित गर्भनिरोधक पिल्स ? यस्तो छ वास्तविकता
Up Next यसरी सेवन गरौं जाडोमा तुलसीलाई, रुँघा-ज्वरोमा लाभदायक
नेपालमा उद्दमी नै किन बन्ने ? सुन्दा अचम्म लाग्छ तर एक पटक पढ्नुहोला
आजकल नेपालका चियापसलहरुमा एउटा रमाइलो ठट्टा निकै चर्चामा छ – “एक जना नेता बन्यो भने १०० रोजगार बर्बाद गर्छ रे…
रुख कटहर अचम्म खालको तरकारी हो । यो तरकारी हो कि फलफूल हो भन्ने कुरामा पनि मतभेद पाइन्छ । कतिपय…
ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिबार जन्मेका मानिसको भविष्य र आचरण यस्तो हुन्छ
मानिसहरु जान्न आतुर हुन्छन की कस्तो मानिस कहिले जन्मदा राम्रो हो वा कहिले जन्मेक भाग्यमानी हुन्छ भनेर र यसै बिषयमा…
साङ्ला देख्दा हामीलाई घिन लाग्छ कतिलाई त डर पनि लाग्छ | गर्मी बिस्तारै बढ्दैछ । गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा र…